BBC oo shaacisay liiska dadka ugu mushaarka badan - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka PA/GETTY IMAGES
Image caption Evans iyo Winkleman ayaa ragga iyo dumarka BBC ugu mushaar badan
Chris Evans ayaa ugu sare maray liiska dadka lacagta ugu badan ka qaata BBC. Wuxuu sameeyey inta u dhaxaysa £2.2 malyan iyo £2.25 malyan sanadkii 2016/2017, halka gabadha ugu mushaarka badan dumarkana ay noqotay Claudia Winkleman oo qaadatay lacag u dhaxaysa £450,000 iyo £500,000.
Qiyaastii 3 meelood oo laba dada qaata lacag ka badan £150,000 ayaa rag ah, marka la barbar dhigo dumarka oo 3/1 noqonaya.
Agaasimaha guud, Tony Hall wuxuu yiri "waa in wax badan laga qabtaa sinnaan la'aanta ragga iyo dumarka iyo kala duwanaanshaha", wuxuuna intaa sii raaciyey "horumar waan samaynay, laakin waa in aan aqoonsannaa in ay tahay in wax badan la qabto, waxaanan si dhakhsiyo leh hore ugu sii riixaynaa si ka duwan sida hay'adaha kale ee warbaahinta"
Image caption Tony Hall Agaasimaha Guud ee BBC
Farqi weyn ayaa sidoo kale ku jira mushaarka ay qaataan dadka xiddigaha ah ee caddaanka ah iyo kuwa ka soo jeeda madowga, Aasiyaanka iyo dadka kale ee midab ahaan laga tirada badan yahay
George Alagiah, Jason Mohammad iyo Trevor Nelson ayaa dadkaas ugu sarreeya, lacagta ay helaanna waxay u dhaxaysaa £250,000 iyo 300,000. Gabdhahana waxaa ugu sarraysa Mishal Husain oo qaadata lacag u dhaxaysa £200,000 iyo £250,000.
Waa markii ugu horraysay ee xiddigaha caanka ah ee BBC mushaarkooda shaaca laga qaado, gaar ahaan kuwa qaata lacag ka badan £150,000.
In shaaca laga qaado waxaa dalbanaya xeerka cusub ee BBC, waxaana uu qabanayaa oo lacagtooda la kashifayaa 96 qof oo ah kuwa ugu mushaarka badan.
Warbixin-sannadeedka ayaa xambaarsan macluumaadka mushaarka si koox-koox ah, taasoo aan banaanka soo dhigayn lacagta saxda ah ee qofku qaato. Waxaa kale oo aan ku jirin xiddigaha lacagtooda ka hela BBC worldwide oo ah qaybta ganacsiga ee BBCda.
Lacagta la soo xigtay ayaa ah mid ka timaada khidmadda ruqsadaha oo kaliya, waxaanan ku jirin lacagaha ay dadkaas ka helaan warbaahinnada kale ama dhaqdhaqaaqyada ganacsi. Waxaa kale oo aan ku jirin lacagaha ay xiddigahaas ka helaan hay'adaha barnaamijyada soo saara ee madaxa banaan.
Image caption Ragga ayaa ka mushaar badan dumarka
Liisku ma kala saarayo dadka BBCda jooga ee shaqooyinka kalena haysta iyo kuwa BBC oo kaliya ka shaqeeya.
Tirooyinka waxay kaloo muujinayaan inaysan is le'ekayn lacagta ay qaataan dadka isku barnaamij ka shaqeeya, sida xaakimiinta barnaamijka Strictly come dancing.
Madaxda xaakimiinta Len Goodman iyo Bruno Tonioli waxay ku jiraan kooxda qaadata £200,000 - £250,000 halka Craig Revel Horwood iyo Darcey Bussell ay ka mid yihiin kooxda qaadata £150,000 iyo £200,000.
Caudia Winkleman oo ah gabar barnaamijka wax ka soo jeedisa waxayna qaadataa lacag u dhaxaysa £450,000 - £500,000, halka gabadha ay isla soo jeediyaan ee Tess Daly ay qaadato lacag intaa ka yar oo ah £350,000 - £400,000.
BBCda ayaa iminka ah hay'adda kaliya ee warbaahineed ee shaacisay lacagaha ay qaataan dadka caanka ah ee ka shaqeeya Raadiyaha iyo TVga, laakin marka la eego dhanka ganacsiga lacagaha la qaato intaa aad bay uga badan yihiin.